News - Taariikhda horumarka ee villa biraha birta ah gudaha iyo dibedda
Taariikhda horumarka ee villa biraha birta ah gudaha iyo dibedda
Dhawaan, suuqa guryaha ayaa qarxay "dabaysha birta birta ah ee birta ka fududa", waxan cusub ayaa sababay in dad badani ay fiiro gaar ah u yeeshaan. Guri bir bir ah ayaa ka soo muuqday Shiinaha 1990-yadii. Maanta, tikniyoolajiyadda dhismaha qaab-dhismeedka biraha waa mid qaan-gaar ah, oo uu dalku dhiirrigeliyey, waxayna si rasmi ah u gashay aragtida dadweynaha. Markaa wadamada shisheeye ee horumaray sidee guri loo dhisaa? Sababtoo ah xoojinta wacyiga deegaanka iyo yaraanta alwaaxda iyo arrimo kale, dalal badan sida Mareykanka, Japan, Ingiriiska, Ustaraaliya, waxay si firfircoon kor ugu qaadayaan codsiga iyo horumarinta guryaha biraha dhaadheer ee biraha dhaadheer.
Horraantii 1960-meeyadii, Australia waxay soo bandhigtay fikradda ah "rakibaadda deg-degga ah ee guryaha la diyaariyey", laakiin maadaama uusan suuqa qaan-gaadhin, si fiican looma horumarsan. Sannadkii 1987-kii, qaab-dhismeed bir ah oo dhuuban oo qaab qabow sameeyay ayaa qaab muuqday, isla markaana qeexitaanka wadajirka ah ee Australia iyo New Zealand, sida / nzs4600 bir qaabdhismeed qabow sameeyay, ayaa la soo saaray oo la hirgeliyay sanadkii 1996. Birta noocan ah waxay leedahay awood qaadid sare. Marka la barbardhigo isku mid ahaanta qaadista qoryaha, waa kaliya 1/3 culeyska qoryaha. Dusha sare waa galvanized. Marka lagu jiro xaalada dib u habeyn la'aan, cimri dhererku wuxuu gaari karaa 75 sano.
Guryaha biraha fudfudud ayaa si dhakhso leh ugu koraya Maraykanka. Sannadkii 1965-kii guryaha yar-yar ee biraha ka samaysan waxay keliya ahaayeen 15% suuqa dhismaha ee Maraykanka; Sannadkii 1990-kii waxay u kacday boqolkiiba 53, halka 1993-kii ay u kacday 68 boqolkiiba halka 2000 ay u kacday 75 boqolkiiba. Jaangoynta, taxanaha, takhasuska, ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada ee qaybaha la deggan yahay iyo qaybaha ayaa ku dhow 100%. Kireynta mashiinada dhismaha ee kala duwan, qalabka iyo aaladaha ayaa ah mid aad u horumarsan, shahaadada ganacsiguna waxay gaareysaa 40%.
Sannadihii ugu dambeeyay, dhismaha nidaamka keel birta birta ah ee birta qabow lagu sameeyay waa qaab dhisme cusub oo si xawli leh uga socda Yurub iyo Ameerika. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa villa, guryaha, goobaha qurxinta, naadiyada xafiisyada, iskuulada, isbitaalada, dhismooyinka ganacsiga iyo wixii la mid ah. Australia gudaheeda, qiyaastii $ 600 milyan oo guryo biraha ka sameysan oo bir bir ah ayaa la dhisay sannad kasta 120,000, oo ka dhigan qiyaastii 24% qiimaha dhammaan ganacsiga dhismaha ee Australia; Ameerika tirada guryaha la dhisay iyadoo la adeegsanayo nidaamkan waxay ka soo booday 55,000 bartamihii 1990s ilaa 325,000 sanadkii 2000. Waqtigaan la joogo, villa noocan oo kale ah wuxuu noqday qaabka dhismaha qaab dhismeedka ugu weyn ee wadamada horumaray.